Maxkamadda Gobolka Banaadir Oo Xukuntay Eedeysanayaal – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Maxkamadda Gobolka Benaadir aya maanta Xukunno kala duwan ku ridday gaaraya 15, kuwaasi oo ku kala eedeysan tuugnimo, kufsi, dil, shil baabuur ah iyo falal kale.
Ehelada eedeysanayaasha iyo marqaatiyaal ayaa ku sugnaa gudaha Maxkamadda Gobolka Benaadir, iyadoo halkaasi lagu soo bandigay caddeymo muujinaya in qaaar ka mid ah eedeysanayaashaasi galeen dambiyada lagu soo oogay.
“Maxkamadda gobolka Banaadir waxay xukun min 20-sano oo xabsi ah ku ridday eedeysanayaasha kala ah: Zakariye Daahir Maxamuud oo 19-jir ah iyo Dalmar Maxamed Xaashi oo 21-jir ah, kuwaasoo lagu helay inay kufsi u geysteen dhibbane Deeqo Cusmaan Cabdi. Maxkamaddu waxay kaloo labada eedeysane ku xukuntay min 20-milyan oo ganaax ah,” ayuu yiri Dr. Xaashi Cilmi.
Sidoo kale, guddoomiyuhu wuxuu sheegay in eedeysane, Maxamed Salaad Maxamed oo 30-jir ah uu bixiyo diyada marxuum Maxamed Ugaas Mustaf oo 20/11/2013 uu ku dilay shil gaari, sidoo kalena maxkamaddu ay lix bilood oo xabsi ah ku xukuntay kaddib markii lagu helay inuu gaariga ku waday sharci la’aan.
C/fitaax Aadan Xasan oo 20-jir ah ayaa isagna lagu xukumay shan sano oo xabsi ah, kaddib markii lagu helay inuu ka qaybqaatay kufsi loo geystay wiil yar, iyadoo guddoomiyuhu uu sheegay in laba ruux oo falkaas kula jiray ay horay maxkamaddu xukunno ugu ridday.
Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir wuxuu xusay in Cumar Xasan Garaad oo lagu xukumay xabsi saddex sano oo xarig ah iyo saddex milyan oo ganaax ah lacageed ah, inkastoo aanu sheegin dambiga lagu helay.